Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vanoti vari kunetseka kuwana marezinesi ekuchera zvicherwa uye pane huori hwakawanda huri kuitika munyaya dzemarezinesi.
Mumwe wevatauri pamusangano waitwa muChinhoyi uyo wakarongwa neVoice of America pamwe neMedia Center, VaCliford Kupheko, vati pane vashandi vebazi rezvicherwa vanoita huori mukupa marezinesi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mutauri, Muzvare Chiedza Chipangura, avo vanoti pamusoro puhuori mitemo haisi kutevedzerwa mubazi iri, izvo zviri kudzinga vanoda kusima mari dzavo munyika.
Nyanzvi munyaya dzezvicherwa vachishanda vakazvimirira, VaGeorge Mugani, vanoti pamutemo rezenesi rinofanirwa kuwanikwa mukati memwedzi mitatu asi nekuda kwemakakatanwa kuti mugodhi ndewani zviri kunonotsa kupihwa kwemarezinesi.
Panyaya yekusavharwa kwemakomba munzvimbo dzinenge dzakambocherwa zvicherwa mumiriri weEnviromental Management Agency (EMA), VaMunyaradzi Nhariswa, vati vanochera zvicherwa havasi kutevedzera zvavanenge vati vachaita mugwaro ravo reEnviromental Impact Assessment (EIA).
VaNhariswa vati bazi ravo riri kuita dzidziso kuvacheri vezvicherwa uye nekusunga avo vanotyora mutemo wekuchengetedza nharaunda.
Muzvare Chiedza vati vanhu vakawanda vari kufa zvikuru vana nekuwira mumakomba anosiyiwa asina kuvharwa nevanenge vachichera zvicherwa.
Vanhu vapinda musangano wanhasi vanosvika makumi mana vawirirana kuti hurumende inofanirwa kuumba homwe yakuti kana makambani anochera zvicherwa asiya makomba, bazi reEMA rigokwanisa kuavhara kuti vanhu vasarasikirwe nehupenyu hwavo kana hwezvipfuwo.